2015 wuxuu noqonayaa sanadkii weyn Apple, maxaa yeelay, waxayna u maleeyeen inay yihiin si ay u sii daayaan jiilka soo socda ee casriga ah. Waxa uu ahaa 11 bilood tan iyo markii la sii daayo iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, waxaana u badan tahay hal bil oo ka fog maqalka dhawaaqay rasmi ah iPhone cusub ka Apple. IPhone cusub waa in loo gudbiyaa sida iPhone 7 ama iPhone 6s Plus. Ilaa hadda, garan mayno magaca rasmiga ah ee iPhone mustaqbalka, laakiin aan ognahay labo ka mid ah waxyaabaha.
iPhone 7 ma aha iPhone toddobaad. iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus waxay ahaayeen iPhone sagaalaad iyo tobnaad. iPhone 7 waa waxa aynu ku magacaabaynaa jiilka xiga, soo socda la bilaabay waaweyn-screen iPhone. Waxaan aaminsan nahay in ka dib markii la sii daayo rasmi ah, Apple bixin doonaa iPhone cusub ugu yaraan laba tirada.
Laakiin, waxa dad badan ayaa weli la yaaban yahay phone cusub uu noqon doono iPhone 6s ama iPhone 7. Waa hagaag, aynu xusuusnaanaa ku saabsan heshiisyada Magacaabista dhaqanka Apple ee. Haddii Apple ulo si ay dhaqan, ka dibna waxa ay u badan tahay in telefoon cusub ee la magacaabi doonaa iPhone 6s. Dabcan, phone this waxaa la socon kara la weyn iPhone 6s Plus iyo version jaban ah waxaa ka mid ah, 6c iPhone. Sidaas, tani waa mid ka mid ah doodaha ugu muhiimsan iyo xujooyin ugu weyn in iPhone cusub ee la magacaabi doonaa iPhone 6s.
Si kastaba ha ahaatee, wararka xanta ah qaar ka mid ah ayaa la socday ku dhawaad ​​labo sano. Warka belefta ah waa in Apple ayaa ka fikiraya tagtey 'S' ee heshiiska magacaabayo, maxaa yeelay, dadkii waxay u Arkaa xun. Waa maxay sababta? Waa hagaag, waxaan hore u leedahay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Qalab cusub waa inay ahaato mid aad u kala duwan oo ka soo nuquladii hore ee iPhone. Waxaa la rabay in lagu sii daran, iyo haddii Apple hayaa ee 'S' magaca tag, markaasaa dadkii waxay xitaa ma heli doono dareen ah in phone arrintani waa wax cusub. Waxay u muuqan doonaa sida kaliya dhagaxa tallaabsashada si iPhone soo socda.
Marka la eego xaqiiqda ah in Apple ayaa ku dhawaaqay iPhone cusub uu noqon doono si kala duwan, ilaalinta magaca hore u muuqataa caqli gal ahayn.
Sidoo kale, sida laga soo xigtay oo ah falanqeeye Apple Ming-Chi Kuo, oo u shaqeeya KGI Securities, ayaa soo saaray note saadaaliyo in ay maal-taas oo uu ku saadaaliyo in Apple dhab daahfuri doonaa iPhone ah 7 dayrta 2015. Taas macnaheedu waa in jiilka dhan 6s ka booddo doonaa oo gebi ahaanba. Waa maxay sababta? Waa hagaag, waxaa la rumeysan yahay in Apple ku dari doonaa feature ah hagaajinta muhiim ah in iPhone soo socda: Force Touch. The telefoonada ee 'S' farcankii iPhone sida caadiga ah ma bixiyaan qaar ka mid ah muuqaalada xun oo xiiso leh cusub (sida Touch Ciidamada).
Laakiin, ka dibna mar kale, aynu ka fikirto 5s iPhone. Marka 5s iPhone la sii daayay, Apple soo bandhigay ID Touch oo wuxuu tegey 64-bit. Isbedel Kuwaasu waxay ahaayeen weyn, laakiin sida cad ma weyn ku filan Apple inay si toos ah u guda galin iPhone 6. Laakiin, ka dibna mar kale Force Touch waa hab ka mid ah horyaalka. Waxaan sii joogi doonaa qasan ilaa September markii Apple rajeynayaa muujin doonaa info mug leh telefoonka cusub.
Ma rabtaa in aad iPhone ah 7 ama iPhone ah 6s?
Hadda, eegno waxa ay dadka qaar ay u heystaan. Maxaad ay doonayaan in ka badan, iPhone 6s ama iPhone 7?
1. "Waxa uu noqon doonaa 6s iPhone ah"
iPhone 7 ee sannadka soo socda? soo nin. Haddii aadan dan u ah 4 ama 5 sano ee lasoo dhaafay tufaax ayaa wareeg joogto ah loo sii daayo. 1 sano 6S 6 sanadka soo socda. Dabcan tufaax ay isbedeli karaan, laakiin socda ee taariikhda ka hor inaad adiga oo kale ma aqaano waxa aad ka hadlaysid. 2016 uu noqon doono sanadka ah ee iPhone 7. Tani waa wax u eg mid si dhab ah warkeeda. Apple ayaa ugu dambeyntii u qaaddey saarka ee Liquid birta taasoo loo isticmaali doonaa in guryaha ee iPhone 7 2016, ma 2015. Waxaad halkan ugu horeysay maqlay.
2. "6s iPhone dabcan"
Aan ku degdegin wax. IPhone 6 ayaa ku soo beegmay ka hor 6s iPhone iyo xaqiiqo ka hor iPhone 7. waan ogahay inaad guys ku faraxsanahay, laakiin iPhone this 7 weli ka badan laba sano iska. Qaado leeyr iyo ka hadlaan iPhone in uu yahay oo kaliya 2 bilood markiiba.
3. "waxaan u maleynayaa in waxa ay noqon doontaa 6s iPhone ah"
Hel xaqiiqda aad guys midig. Fiiri taariikhda daayo iPhone:
iPhone 6S ama qaar ka mid ah derivative kale ee 6 waxaa aad u badan la filayo.
4. "Waa in la 7 iPhone ah"
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in aan wareega kor-aad ku war ah oo ku saabsan warka belefta ah ee kale: iPhone 8 doonayo inuu la sii daayay ku dhawaad ​​Sept. 2016 (ama waxaa laga yaabaa iPhone 7, habka ugu Apple sameeya ay magaca by).
5. "Ma u baahan tahay 7 iPhone ah"
Waxaan qabaa iPhone 6 waa fool, dib uu u muuqdo mid caag ah oo ay i xasuusineysaa Samsung ah. IPhone 5 waa ka wanaagsan yahay. ay tahay in ay ku boodaan si toos ah u ah 7 sababtoo ah 6 qallooca lagu daray, thhey u baahan tahay oo dhan dib-u-qaabaynta telefoonka waxaana rajeynayaa in ay shabahaya doonaa fiirin fron iPhone 5.
6. "6s noqon doona ee soo socda"
Haddii aan taariikhda hore iyo Apple waa wanaagsan leh marka ay timaado iPhone. IPhone xiga wuxuu noqon doonaa 6s iyo fiirin doonaa inay isku iPhone 6 laakiin waxay leedahay waxyaalo cusub, qaybo ka wanaagsan oo prolly hagaajin doonaa arrinta bendgate xeeran iPhone 6 iyo 6 Plus.
7. "Ma u baahan tahay iPhone 7!"
Haddii ay 6s waxaan Ma doonayo, waayo, waxaan u baddashaan wax kale
8. "noqon doonaa 6s"
Sii daayo Tani waxa ay noqon doontaa mid ah in la sii daayo 4s ah / 5S. Tani waxay u badan tahay waxay noqon doontaa version ah la casriyeeyay ee 6, hal ama laba iskujoog yar laga yaabee in mid ka mid isbedel 'weyn' kaas oo ay ka iibin doonaa; shidma faraha 5S ah, tusaale ahaan. Uma maleynayo xukun wireless iman doono ilaa 2016-ka, si kastaba ha ahaatee waxa ay u baahan ka badan camera cusub oo la casriyeeyay screen xal iwm si ay u dhaqdhaqaaqdo dadka! Apple dumin doonaa oo wax ka mid ah bacda, waxa kaliya ee ciyaarta sugitaanka halkan ku ...
9. "Waa iPhone 6s"
"Apple badanaa hayaa design isku mid ah laba farcankii iPhone, sidaas oo kale, slimmer, design cusub shido iyo uriya of 6 iPhone ayaa la filayaa in ay ka qaaddaan si iPhone 6, sidoo kale." Waxaan doonayaa inaan noqon royally PO'ed haddii style iP6 aan loo lagu soo wareejiyo iP6s aad u!
10. "Hope iPhone 7 iman lahaa ka hor"
Waxaan qabaa inaan arki doono iPhone 7 2016 Laakiin waxaan rajaynayaa in aad xaq u leedahay! maxaa yeelay, waan ku iibsan lahayd iPhone 7 September oo aan libiqsanayn kasta
Runta waxa ay tahay, dadka ku doodi karo iyo ka doodista ku saabsan magaca iPhone cusub, laakiin waxba waa la ogaan doonaa ilaa Apple Xaqiijiyay magaca rasmi ah. Marka la eego xaqiiqda hore u sheegay, iPhone cusub ee lagu magacaabi karo iPhone 7. Laakiin, Apple waxay leedahay taariikh dheer oo waxay u badan tahay in telefoonka cusub hayn doonaa magaca iPhone 6s ah. Haddii Touch Force waa feature kaliya la yaab leh oo cusub, runtii ma aha sabab ku filan shirkadda inay u boodboodaan ay caado dheer. Apple Watch durbaba habkaani, sidaa daraadeed waxa aan manta wax cusub.
U dayactir GPS Dhibaatooyinka on iPhone
iPhone Dhibaatooyinka Connection? Ka u sameeyeen ee ilbiriqsi
2 Methods si ay u gudbiyaan MP3 in iPhone
> Resource > iPhone > Waxaa jiri doona iPhone 7 ama iPhone 6s ah?